I-Krishna Niwas Mount Abu, (Igumbi leDeluxe)
Igumbi elise- ihotele enembali sinombuki zindwendwe onguPushpendra
Enye yezona ndawo zokuphumla zokuphumla kwiNtaba ye-Abu, kunye nokudityaniswa okumangalisayo kwendawo entle kunye ne-ambience eshushu, echaza ubunewunewu kunye nolonwabo olukhoyo apha. Yenzelwe ukubonelela ngokuphumla kunye namava okuvuselela kwiindwendwe zethu.Ihotele yethu eMount Abu ine-atrium egqwesileyo kwaye ibonelela ngombono omkhulu wendalo engqongileyo. Ukhetho olubanzi lweendawo zokuhlala njengehotele kunye ne-ambience ezolileyo yendawo ekuchithelwa kuyo iiholide iyenza ibe yindawo entle ukonwabela iholide yokuphumla kunye nabantu obathandayo, iyenza ibe yeyona hotele ilungileyo yosapho eMount Abu. Imvelaphi yayo yembali kunye neziseko zophuhliso zongeza kubuhle bokungcangcazela okuhle kwimpepho epholileyo kwiatmosfera eyingqongileyo.
Amagumbi eDeluxe athambileyo malunga ne-approx. I-150 square feet ngobukhulu kwaye ifanelekile isibini okanye intsapho encinci. Kuba akukho ndawo yeebhedi ezongezelelweyo, sicebisa la magumbi kubahambi abangatshatanga, izibini okanye usapho oluneentsana. Iyakwazi ukuhlalisa abantu abadala aba-2 kunye nomntwana oyi-1 ngaphandle koomatrasi abongezelelweyo. Onke amagumbi edeluxe ane-air-conditioning, abanzi, anomoya owaneleyo ngodonga ukuya eludongeni ikhaphethi kwaye axhotyiswe ngazo zonke izinto zale mihla. Onke amagumbi e-deluxe ahluke omnye komnye kwaye abizwa ngokuba nguMathura, Kunjvan, Dwarka, Gowardhan.
inika umbono ogqwesileyo phezu kwechibi lasePichola, kunye neziqithi zayo ezingamawele-iJag Mahal Island (iLake Palace) kunye neSiqithi saseJagmandir. I-Vista ikwabandakanya iNdlu yeSixeko, iTempile yaseJagdish kunye nezakhiwo ezintle zeSixeko esiDala. Mgama umntu unokubona iMonsoon Palace yothando ethe ngcu phezu kweNtaba iBansdara, kunye neAravali Range etshayelayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Pushpendra
Siza kufumaneka ukukhokela undwendwe !!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mount Abu